Olee otú Naghachi Data si Samsung Micro SD kaadị
Samsung SD Kaadị Iweghachite Software: Naghachi Data si Samsung Micro SD kaadị
> Resource> Samsung> Samsung SD Kaadị Iweghachite Software: Naghachi Data si Samsung Micro SD kaadị
Olee otú m nwere naghachi data furu efu si SD kaadị on Samsung Galaxy?
M nwere Samsung Galaxy m na a 16GB Micro SD kaadị. Ụnyaahụ m na mberede ehichapụ niile videos m gbara m obere nwa mgbe m na-ekiri ha na m Galaxy. Na m maara na vidio ndị echekwara na Micro SD kaadị, ma ugbu a, m nwere ike na-chọta ụfọdụ foto na ya. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike naputa ha? M ga-chọrọ n'ezie ha azụ. Daalụ nke ukwuu.
Ekwu okwu nke videos na foto, ha na-n'ezie echekwara na SD kaadị na gị Samsung Galaxy. Mgbe ị na-ezighị ehichapụ ha site na ngwaọrụ gị, ị ga mma ịkwụsị iji gị Samsung ngwaọrụ na-foto ma ọ bụ video, ma ọ bụ mbubata ọzọ faịlụ ka SD kaadị. The ehichapụ faịlụ na-agaghị ozugbo, na na akara dị ka na-abaghị uru na-apụghị ịhụ anya. Mgbe ị na-Dee nke ọhụrụ data na, ha ga-overwritten na-apụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi.
N'ihi ya, i kwesịrị ịrụ a mgbake ozugbo o kwere omume. Kedu? Na a Samsung SD kaadị mgbake software: Wondershare Dr.Fone for Android (Andorid Data Recovery), ọ bụ nnọọ mfe. Ị nwere ike iji ya ozugbo iṅomi gị Samsung Micro SD kaadị ịchọta furu efu video na photos. E wezụga, ọ na-enye gị ohere iji naghachi ehichapụ ozi na kọntaktị site na Android ngwaọrụ.
Download free ikpe version nke Samsung SD kaadị mgbake software n'okpuru:
Cheta na: biko ego gị Samsung ngwaọrụ na Android OS ebe a tupu ị malite. Ọ bụghị ihe niile Samsung ngwaọrụ na-akwado ugbu a, site Wondershare Dr.Fone for Android, ma ị na kwụsịrị ya mbụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi photos, video na music bụghị naanị site na SD kaadị n'ime ekwentị mkpanaaka gị, kamakwa site na kọmputa, ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ dị ka mpụga ike draịva, ese foto, camcorders, USB draịva, iPod, MP3 / MP4 Player , wdg, i nwere ike iji Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac.
A zuru ndu nke Samsung Micro SD kaadị mgbake
Na mmalite, wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị. Ị ga-ahụ isi window n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Samsung ngwaọrụ na kọmputa (nwee USB debugging)
Ị adịghị mkpa na-SD kaadị nke gị Samsung ngwaọrụ. Kpọmkwem Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-ahụ window n'okpuru mgbe ngwaọrụ njikọ, mkpa ka ị nwee USB debugging na gị Samsung ngwaọrụ. Soro ụzọ n'okpuru:
Rịba ama: Mgbe ị malitere, jide n'aka na ngwaọrụ gị nwere ike Switched na batrị bụ karịa 20%.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị Samsung ịchọta data na ya
Mgbe ị na-okokụre nzọụkwụ mbụ, ị ga-esi na window n'okpuru. Ebe a gị na mkpa iji pịa "Malite" button ka Samsung SD kaadị mgbake software nyochaa data na ngwaọrụ gị.
Tupu scanning, a ga-ihe ka popping elu na ekwentị gị na ihuenyo. Pịa "Kwe Ka" ka ọ na-aga. Wee pịa "Malite" na window n'okpuru ịnọgide ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị furu efu data na ya.
Nzọụkwụ 3. Tulee na-agbake data si Samsung SD kaadị
Mgbe iṅomi dechara, ị nwere ike ịlele gị data na Doppler N'ihi ya, nke a na-site Samsung SD kaadị mgbake software. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike ịhụchalụ na-agbake ozi na kọntaktị site na kaadị SIM ọ bụrụ na ị nwere mkpa.
Download free ikpe version nke Samsung Micro SD kaadị mgbake software n'okpuru nwere a na-agbalị:
Cheta na: biko ego gị Samsung ngwaọrụ na Android OS ebe a tupu ị na-eme mgbake. Ọ bụghị ihe niile Samsung ngwaọrụ na-akwado ugbu a, site Wondershare Dr.Fone for Android, ma ị na kwụsịrị ya mbụ.
Olee otú Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si gam akporo Devices
3 Atụmatụ na YouTube Iji na Samsung ekwentị mkpanaaka na Samsung TV
Samsung video Ntụgharị - video ka Samsung igwe
Samsung Paswọdu Iweghachite maka Smart ekwentị mkpanaaka na Laptọọpụ
4 Ihe Ị Mkpa Ịmata banyere Samsung Task Manager
Olee ka jikota oyiri Kọntaktị na Samsung Galaxy S3
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite Samsung Galaxy S3
Nyefee faịlụ site na Galaxy S3 ka PC